သစ္စာ ~ Nge Naing
Sunday, October 17, 2010 Nge Naing 25 comments
သင်တို့ ၀ိညာဉ် ပူးကပ်ဝင်၍
ကျွနိုပ်သည်ကား အမျိုးဂုဏ်မောက် သစ္စာဖောက်ဟု
ကျွနိုပ် အသက်လမ်းတ၀က်မှ ပေးဆက်ရလည်း
တာဝန်တရပ် ကျွေပြွန် မှတ်၍
ထပ်ဆင့်ပျော်ဝင် ကျွနိုပ် ၀ိညာဉ်သည်
သင်တို့ ရှိရာ ကျွနိုပ်လာမည်
ဓါတ်ပုံကို Google image မှ ကူးယူဖေါ်ပြပါတယ်။
တပါတီအာဏာရှင်စနစ်ကို ဖြုတ်ချနိုင်ဖို့အတွက် 8.8.88 အရေးတော်ပုံကြီးကို ဖြစ်လာအောင် တောစွန်အုံဖျားအထိ စည်းရုံးလှုံ့ဆော်နိုင်ခဲ့ပြီး တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ အရေးတော်ပုံကြီး ဖြစ်လာအောင် စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့သူ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် သူရဲကောင်း ကိုမင်းကိုနိုင်ရဲ့ ၄၈ နှစ် အထိမ်အမှတ် ပို့စ်ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုမင်းကိုနိုင် အမြန်ဆုံး လွတ်မြောက်ပါစေ။ မပြီးပြတ်သေးသော ဒီမိုကရေစီ တော်လှန်ရေးကို အောင်ပွဲရတဲ့အထိ ဆက်လက် ဦးဆောင်နိုင်ပါစေ။
ဒီကဗျာကို ကျွန်မ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က ဘလော့ဂ်တခုကနေ ကူးယူပြီး သိမ်းထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘလော့ဂ်အတော်များများမှာလည်း ဖတ်ဖူးပါတယ်။ ကူးယူထားတဲ့ Link ကို မမှတ်ထားမိတဲ့အတွက် အားလုံးကို တောင်းပန်ပါတယ်။
(မနက်က 17/10/10 11:25 PM မှာ တင်တဲ့ပို့စ်ကို ကိုမင်းကိုနိုင်ရဲ့ ၄၉ နှစ်မြောက်မွေးနေ့ အမှတ်တရအဖြစ် အပေါ် ခဏပြန်တင်ထားပါတယ်။)
ကိုမင်းကိုနိုင် အမြန်ဆုံး လွတ်မြောက်ပြီး ခံစားနေရတဲ့ ရောဂါဝေဒနာတွေ ပျောက်ကင်းကာ ကျန်းမာပျော်ရွှင်စွာ သက်တော်ရာကျော် နေရပြီး အနာဂတ်ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံတ်ာကို ဦးဆောင်နိုင်ပါစေလို့ (၄၉) နှစ်မြောက်မေးနေ့အတွက် ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
October 18, 2010 at 12:44 AM Reply
if you do not know, please copy and paste some sentence to Google and press search button.
October 18, 2010 at 2:38 AM Reply
Ma Nge Naing !
This comment may not so concern with ur present post. But , just i want to say what i feel as Myanmar People. By reading comments given by people in your previous post, i had known one thing that our myanmar people are not in unity. We are trying to point out each other (inculding you and also me) . Actually, we should try to organise people of Myanamar to against military government. But we should know who Myanmar people are. Pls understand that most of Myanmar People dont accept Mulsium as Myanmar because of bad attitude of Mulsium (not all mulsium but most ).I really feel sorry that now i am seeing myanmar people are fighting each other because of mulsims(including you) . What we should do at this moment is that we dont need to think abt mulsium ( not need to prevent mulsium) , we need to think our myanmar people and country. Pls understand that.
PS| My english is so poor. But i hope that everybody can understand what i want to say. Thanks
October 18, 2010 at 3:20 AM Reply
ကဗျာဖတ်သွားတယ်.. ကိုမင်းကိုနိုင်တို့လည်း လွတ်လာရင် ကောင်းမယ်..။ ဒီလောက်ပဲ ပြောတက်တော့တယ် မငယ်ရေ..။
October 18, 2010 at 6:58 PM Reply
Harvey,British I.C.S who served in east India countries and History Prof.of Far East Regions, Oxford Univ.
Most Myanmar scholars name him as defender of British colony.
However,his remark national I.D of us is quite true :
"I do not argue that Burmese are most intellectual and bravest in Indo-China regions,but weakest points are jealous to each other and non-cohesive.
(shown in the book "I am I.C.S" by 1st chairman of SB, U Chan Tha).
Indo-China was renamed to S.E. Asia during II W.W. by allied forces.
October 19, 2010 at 2:02 PM Reply
ကိုမင်းကိုနိုင်မွေးနေ့ မှာ စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာရှိပါစေ။ အကျဉ်းထောင်မှ အမြန်လွတ်မြောက်ပါစေ။ အသက်ရှည်ပျော်ရွှင်ပါစေလို့ 
October 19, 2010 at 8:01 PM Reply
October 20, 2010 at 8:26 AM Reply
October 21, 2010 at 12:37 AM Reply
I want blog owner's email
can anyone give me?
October 21, 2010 at 2:45 PM Reply
စစ်ကျွန်သက် ရှည်အောင်လုပ်ပေးတဲ့ . . . ပလီဆရာတွေနဲ့ မွတ်ဆလင်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကို တိုင်းပြည်သစ္စာဖေါက်စာရင်းထဲ မထည့်သင့်ဘူးလား? အဲဒီ မွတ်ဆလင်တွေရဲ့ ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကို အနောက်နိုင်ငံတွေကနေ မနှင်ထုတ်သင့်ဘူးလား ? ဖြေပေးပါ ။ ကုလားအချင်းချင်း ရန်တိုက်တယ်လို့တော့ မပြောနဲ့။ ဒီမိုဘက်တော်သား ကုလားတွေကို နအဖနဲ့လက်တွဲတဲ့ကုလားတွေနဲ့ ရန်သူလိုသဘောထား ဖို့ တိုက်တွန်းရမှာပဲ။ ဒီမိုဘက်တော်သား သခင်ကရင်တွေက . . . သခင်ကရင်အချင်းချင်း DKBA ကို ရန်သူလိုသဘောထားရင်.. ကုလားတွေလဲ အချင်းချင်းရန်သူလို သဘောထားရမှာပဲ။ ကျုပ်တို့ သခင်ဗမာတွေလဲ နအဖရွေးကောက်ပွဲကို ထောက်ခံသူ ဗမာမှန်သမျှ ရန်သူလိုသဘောထားကြတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲက အရမ်းကို နီးပ်နေပါပြီ။ နအဖက်နဲ့ လက်တွဲနေတဲ့ မွတ်ဆလင်တွေကို မဆန့်ကျင် လိုဘူးဆိုရင် အတိအလင်းပြောပါ။ ကျုပ်တို့တွေလဲ အချိန်ကုန်ခံပြီး ကုလားတွေကို ဆန့်ကျင်ဖို့ မငယ်နိုင်ကို မစည်းရုံးတော့ဘူး။
October 21, 2010 at 4:13 PM Reply
October 21, 2010 at 4:18 PM Reply
Pls go and read comments given at Ko Paw Blog. I hope that you all (Demo Bloggers) should show your real attitude on Mulsiums who support Military Government.
ပြန်လာပြီ ပန်ထွာဧကရီ says:
October 17, 2011 at 11:40 PM Reply
(ကိုမင်းကိုနိုင်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အတွက် ကျိုင်းတုံထောင်ထဲမှာ ရေးစပ်ခဲ့တဲ့ "ပြန်လာပြီ ပန်ထွာဧကရီ" သီချင်းကို
နားဆင်ရန် ခေါင်းစဉ်ကို နှိပ်ပါ။)
ရေး - မင်းကိုနိုင် ။
သီဆိုသူ - မျိုးဆက်​သစ်လူငယ်များ
( ပြန်လာပြီ ပန်ထွာ ဧကရီ )
သေနင်္ဂဗျူဟာ ----နည်းပရိယာယ်တွေ-----( အမြင်မှန်တွေး---) အပြင်ကလူကို အတွင်းစည်း﻿ အ၀င်မခံရေး---
ဘယ်သူတရားမျှတ------ဘယ်သူက အဓမ္မ--------အမှောင်နဲ.အလင်း ---အားခြင်း
မင်းကိုနိုင် ကို ရှက်ပါ says:
October 18, 2011 at 12:51 AM Reply
နိုင်ငံအတွက် မျက်ရွဲ ရတနာ။
ရဲဘော်တွေနဲ့ သေအတူ ရှင်မကွာ။
သူက တကယ့် လူသားကောင်း ဖြစ်တယ်
ကျင့်ဝတ်တွေထဲ အမြဲ လိုက်နာ။
သူ့ စာကဗျာတွေ က -
သူ့ စကားလုံးတွေ က -
နေတစင်းလို အမြဲ လင်းတယ်။
သူ့ သမာဓိက -
ခေတ်တခေတ်ရဲ့ သာယာ မူးယစ်မှုတွေအောက် မသက်ရောက်ဘူး
ထောင်နံရံတွေကို ဖောက်၊ မှတ်ကျောက်တင်ခဲ့တယ်။
မျက်နှာတွေ ပြည့်သိပ်.. ငါ-တံဆိပ် ခပ်နှိပ်ထားတဲ့
ခါတော်မီ စာမျက်နှာထိပ်မှာ မရှိဘူး
တို့တွေ အားလုံးရဲ့ နှလုံးစိတ်မှာသာ
၁၈ ရက် အောက်တိုဘာမှာ ကျရောက်မဲ့ မင်းကိုနိုင်ရဲ့ ၄၉ နှစ်မြောက် မွေးနေ့အတွက်-
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား အားလုံးနဲ့အတူ အမြန်ဆုံး လွတ်မြောက်စေကြောင်း.. ဆန္ဒလောင်းလျက်...
၀န်ခံချက် - ကဗျာ ခေါင်းစဉ်ကို.. မိုးမိုး(အင်းလျား) ၏ ငြိမ်းကိုရှက်ပါ ၀တ္တုခေါင်းစဉ် မှ နှစ်သက်လေးမြတ်စွာ စကားလှယ် သုံးစွဲထားပါသည်။
မျက်ကွယ်ထောင့်ကို ခေါင်းငဲ့ကြည့်ခြင်း says:
October 18, 2011 at 1:00 AM Reply
("မျက်ကွယ်ထောင့်ကို ခေါင်းငဲ့ကြည့်ခြင်း" ခေါင်းစဉ်ကို နှိပ်ပြီး အပြည့်အစုံကို ဖတ်နိုင်ပါတယ်။)
အဲဒီ အချိန်တွေ တုန်းက…. စာဖတ်နေ သူ သည် လည်း.. ၁၀ တန်း ဖြေပြီးကာစ ၁၆ နှစ် အရွယ်..။
ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်က..ငွေစက္ကူ သိမ်း.. ကျောင်းသား လှုပ်ရှားမူ တွေ ဖြစ်လာလို့… ကျောင်းတွေ ပိတ်ပြီး ပြန်ရောက် လာကြတဲ့.. အကို တွေ အမ တွေ ရဲ့.. စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်.. ပြောပြချက် တွေကို.. ပါးစပ် အဟောင်းသား နဲ့.... နားထောင် နေ ခဲ့ ဖူး သူ။
ကျောင်းဆောင်တွေ ရှေ့မှာ…ပိုက်ဆံ တွေ စက္ကူစုတ်ဖြစ်သွားလို့.. ကျောင်းသားတွေ..အော်ဟစ် ဆူပူ ကြတာ တဲ့…
ဖုန်းမော် တို့.. သေနတ် နဲ့ ပြစ်ခံ ရ တာတဲ့။ အင်းလျားကန် ဘောင်ပေါ်မှာ.. လုံထိန်းတွေက တုတ်တွေ နဲ့ လိုက်ရိုက် တာများ..ရေထဲထိ ဆင်းပြီး အသေရိုက်တာ…တဲ့။
ကျောင်းကြီးကို..အဓိပတိ ပေါက်ကနေ အပေါက်တွေ အကုန်ပိတ် ဖမ်းတာ… အာစီ ထဲက..လူတွေ အကုန်ပါသွား တာ တဲ့..။
နယ်တွေ ကို ပြန်ရောက်လာတဲ့…တက္ကသိုလ် ကျောင်းသား တွေ နဲ့.. နယ်ခံ ကျောင်းသား..လူထု ရဲ့ ချိတ်ဆက် လှုပ်ရှားမူတွေ ။
ရန်ကုန်ကနေ.. နယ်အသီးအသီး ကို လျှို့ဝှက် ဆင်းလာကြတဲ့.. စည်းရုံး လှုံ့ဆော်သူ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား တွေ…။
အားလုံးအတွက် ရည်စူးတဲ့ ကိုမင်းကိုနိုင်ရဲ့ ၄၉ နှစ် ပြည့် မွေးနေ့ says:
October 18, 2011 at 4:17 AM Reply
အောက်တိုဘာလ ၁၇ ရက်၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ်
“ကိုယ်တကိုယ်တည်း အတွက် လုပ်တဲ့ပွဲ မဖြစ်စေချင်ဘူး၊ အားလုံးအတွက် အမှတ်တရ ဖြစ်စေချင်တယ်” .....
ဟူသည့် စကားကို ထောင်ဒဏ် ၆၅ နှစ် ကျခံနေရသူ ကျိုင်းတုံ အကျဉ်းထောင်မှ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင်က အောက်တိုဘာလ ၁၈ ရက်နေ့မှာ ကျရောက်မည့် သူ့မွေးနေ့အတွက် စကားလက်ဆောင် ပါးလိုက်ကြောင်း သူ၏ ညီမဖြစ်သူ မမီမီလွင်က မဇ္စျိမ ကို ပြောသည်။
အသက် ၄၉ နှစ် ပြည့်မြောက်တော့မည့် ကိုမင်းကိုနိုင်က အင်္ဂါနေ့တွင် ပြုလုပ်မည့် မွေးနေ့ပွဲတွင် စကားလက်ဆောင် ပါးရန် ယခုအခါ မှာကြားထားသည်။
မွေးနေ့ပွဲကို အင်းစိန်ရှိ သမိုင်းမြို့မ ပရိယတ္တိစာသင် တိုက်တွင် သံဃာအပါး ၁၀၀ ကျော်အား အာရုဏ်ဆွမ်း ကပ်လှူပူဇော်မှာဖြစ်ပြီး ဧည့်သည်များအား နံနက် ၈ နာရီမှစတင် ဧည့်ခံမည် ဖြစ်သည်။
“စည်စည်ကားကား ဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်းက ဒီလိုပါ။ သူပြန်လာလိမ့် မယ်လို့ ကျမတို့ မျှော်လင့်ထားတာကိုး။ အဲဒီအတွက်လည်း ရည်ရွယ်ထားတာပါ။ အခုတော့ သူပြန်မလာဘူး ဆိုတဲ့ အခါကျတော့ သူ့ကိုချစ်ခင်တဲ့ သူ့ကို လေးစားတဲ့ သူ့ရဲ့ အပေါင်းအသင်း မိတ်ဆွေတွေကလဲ ဒီပွဲလေးမှာ လာချင်တဲ့အတွက် အခုလို စည်စည်ကားကားလေး ဖြစ်သွားရတာပါ” ဟု မမီမီလွင်က ပြောသည်။
မွေးနေ့ပွဲအတွက် ဖိတ်စာ ၈၅၀ ရိုက်နှိပ်ကာ ဖြန့်ဝေ ဖိတ်ကြားခဲ့သော်လည်း ယခုအချိန်တွင် အဆိုပါ ဖိတ်စာများနှင့် မလောက်ငှသည့်အတွက် မိတ္တူများ ဆွဲပြီး လိုက်ဝေနေရသည်။ ဖိတ်ကြားထားသည့် သူများထဲတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအဝင် NLD မှ ခေါင်းဆောင်အားလုံး ပါဝင်ပြီး ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျခံနေရသူ မိသားစုဝင်များ၊ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များ၊ မျိုးဆက်သစ် လူငယ်များလည်း ပါဝင်သည်။
“နောင်တော်ကြီး ဗကသ ဥက္ကဋ္ဌ ကိုမင်းကိုနိုင် အတွက် နောက်နေ့ ကျရောက်မယ့် မွေးနေ့မှာ သီချင်း လက်ဆောင် အဖြစ် ကျနော်တို့တွေ သီချင်းဆိုမှာပေါ့နော်။ နောက်နှစ်တွေမှာလဲ သူကိုယ်တိုင် ထိုင်ကြည့်နေမယ့် စင်ပေါ်မှာ ကျနော်တို့တွေ သီချင်းဆိုချင်ပါတယ်” ဟု ဗကသ အဖွဲ့မှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ကိုမင်းသွေးသစ်က မဇ္စျိမကို ပြောသည်။
ပြီးခဲ့သည့် အောက်တိုဘာ ၁၂ ရက်နေ့က သမ္မတ အမိန့်ဖြင့် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်တွင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၂၁၈ ဦးသာ ပါဝင်သည်။
ကိုမင်းကိုနုိုင် ကိုယ်တိုင် ရေးစပ် သီဆိုထားတဲ့ "ပြန်လာပြီ ပန်ထွာဧကရီ" သီချင်း says:
October 18, 2011 at 8:05 AM Reply
(ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ကိုမင်းကိုနုိုင် ကျိုင်းတုံထောင်ထဲမှာ ရေးစပ်ခဲ့တဲ့ "ပြန်လာပြီ ပန်ထွာဧကရီ" သီချင်းကို လွန်ခဲ့တဲ့ ၆ နှစ် ကိုမင်းကိုနုိုင် ပထမအကြိမ် နှစ်ရှည်အကျဉ်းသားဘ၀က လွတ်မြောက်လာစဉ်က ကိုမင်းကိုနုိုင် ကိုယ်တိုင် သီဆိုထားတာကို နားဆင်ရန် ခေါင်းစဉ်ကို နှိပ်ပါ။)
ရေး - ကိုမင်းကိုနိုင်
ဆို - ကိုမင်းကိုနိုင်
နောက်ခံတီးလုံး (အကြမ်း) - ကိုဟန်
ဒီမြို့ရိုးထက်သို့ ခြေ​တင်လှမ်း ဖြတ်လို့
( ပြန်လာပြီ ပန်ထွာဧကရီ )
( အမြင်မှန်တွေး )
( အ၀င်မခံရေး )
ဒီမြို့ရိုးထက်သို့ စည်တော်ကြီး နှက်ဖို့
( ပြန်လာပြီ ပန်ထွာဧကရီ ) ၃
(ရင်းမြစ် - ကိုမိုးအေး DVB)
October 18, 2011 at 11:24 PM Reply
ကိုပေါ်ဦး စစ်အုပ်စုရဲ့ မတရား အဖမ်းဆီး ခံနေရတာကနေ အမြန်ဆုံး လွတ်မြောက်ပါစေ၊
ကိုပေါ်ဦး ခံစားနေရတဲ့ ကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရောဂါတွေရော၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဝေဒနာတွေပါ သက်သာ ပျောက်ကင်းပါစေ၊
ကိုပေါ်ဦး အသက်ရှည်ရှည် ကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေ အကျိုးကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် သယ်ပိုးထမ်းဆောင်ခွင့် ရပါစေ၊
ကိုပေါ်ဦး အနေနဲ့ စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံတော်သစ်ကြီးမှာ အန်တီစုနဲ့ အတူ မကြာခင်မှာပဲ စတင်ပြီး ဦးဆောင် တာဝန်ယူနိုင်သူ ဖြစ်ပါစေ
လို့ ကိုမင်းကိုနိုင် ခေါ် ကိုပေါ်ဦးထွန်း ရဲ့ ၄၉ နှစ်ပြည့် မွေးနေ့မှာ ဆုတောင်းပါတယ်။
မောင် (ခေတ္တစင်္ကာပူ) says:
October 19, 2011 at 5:03 AM Reply
မငယ်နိုင် ပိုစ်.က မနေ.က တင်ပြီး ကွန်းမန်.တွေက ၂၀၁၀ က ကွန်းမန်.တွေ ဖြစ်နေတယ်
အသစ်တင်စရာမရှိလို. ဒိတ်ပြောင်း ပြန်တင်တာလား
November 29, 2011 at 2:04 PM Reply
မောင် (ခေတ္တစင်္ကာပူ) က စင်ကာပူ က မဟုတ်ပါ..
ရုရှနိုင်ငံ၊ မော်စကိုမြို့က ဖြစ်ပါတယ်..
December 9, 2011 at 4:34 PM Reply
ဖြစ်စဉ်တခုကို ကိုယ်လိုချင်သလို မဆီမဆိုင် အတင်းဆွဲပြီး ငါ့စကားနွားရ ရေးတဲ့၊ ဦးနှောက်မဲ့ စစ်ခွေး ပရိသတ်အကြိုက် ရေးတဲ့၊ အသိမဲ့၊ ခံယူချက်မဲ့ လူပိန်းပရိသတ်အကြိုက် ရေးတဲ့၊ ကလေးတွေး တွေးပြီး၊ လူပိန်းတွေး တွေးပြီး လမ်းဘေးက အုတ်ကြားမြက်ပေါက် အပြောအဆိုမျိုးနဲ့ မူ၊ ဘောင်၊ အထိန်းအကွပ် မရှိဘဲ ပရမ်းပတာ ရေးချင်ရာ ရေးတဲ့ အဆင့်အတန်း အနိမ့်တကာ့ အနိမ့်ဆုံး နိုင်ငံရေးဘလော့တွေထဲမှာ Myanmar Express ဘလော့က အဆင့်အတန်း အနိမ့်ဆုံးပဲ..
စစ်ကျွန် ဒေါ်လာစား က ပြည်သူ့ဘက်သား မငယ်နိုင် ကို ၂၀၁၀ ခုနှစ်၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ကတဲက အခုထိ နှောင့်ယှက်လာတာပါ says:
December 9, 2011 at 5:46 PM Reply
စစ်ခေါင်းဆောင်တွေက ပြည်သူတွေ မသိအောင် ဖုံးထားတဲ့ သမိုင်းမှန်တွေကို ထုတ်ဖော်ပေးနေတဲ့၊ စစ်အုပ်စုက ပြည်သူတွေကို ဥပဒေမဲ့ ဖိနှိပ် သတ်ဖြတ် နှိပ်စက်နေတဲ့ ပကတိ ဖြစ်ရပ်မှန်တွေကို တင်ပြပေးနေတဲ့ မငယ်နိုင် ကို Myanmar Express ဘလော့ဂ်က ဒေါ်လာစား ဆိုသူက
ရက်ရှည်လများ စဉ်ဆက်မပြတ် ပုတ်ခတ် တိုက်ခိုက် နှောင့်ယှက်လာတဲ့ အကြောင်းကို မငယ်နိုင်က စာဖတ်သူ လူသစ်တွေကို ရှင်းပြထားတာပါ။
(December 2, 2011 12:14 PM)
Myanmar Express ဘလော့ဂ်က ဒေါ်လာစားက အားအားလျားလျား ယောက်ျားလုပ်ပြီး မရှက်မကြောက် လူတကာအကြောင်း မဟုတ်မဟတ် အတင်းပြောထားတဲ့ Link တွေကို ကျက်သရေ ယုတ်လွန်းလို့ ဒီဘလော့ဂ်မှာ လက်မခံဘူး။ နောက် ဘယ်တော့မှ လာမတင်နဲ့။ အတင်းပြောတာတွေကို ဒီဘလော့ဂ်မှာ လက်မခံဘူး။ အခု လာတင်ထားတဲ့ အပေါ်ကမှတ်ချက်ကိုလည်း ဖျက်ဖို့ ရှိတယ်။ ဒေါ်လာစား ဘလော့ဂ်မှာ ရှိသမျှ ဓါတ်ပုံတွေက ဘယ်ထောက်လှန်းရေးဆီကမှ မဟုတ်ဘူး။ Facebook မှာ သူများတင်ထားတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေကို ခွင့်မတောင်းဘဲ ခိုးတင်ထားတဲ့ ပုံတွေချည်းပဲ။
ဒေါ်လာစားက ABSDF နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အတွင်းသိဖြစ်ဖို့ နေနေသာသာ အပေါ်ယံတောင် သေချာ မသိဘူး။ ဒေါ်လာစားက သူထင်ရာတွေကို စိတ်ကူးနဲ့ လုပ်ကြံဖန်တီးပြီး အတည်ပေါက်နဲ့ ရေးချင်ရာ ရေးပြီး လူတကာကို နာမည်ဖျက်နေတာ၊ အပုပ်ချနေတာ။
ဒေါ်လာစားက သူများအကြောင်း အတင်း ရေးတာတွေကတော့ ဘယ်လောက်မှန်မမှန် မသိဘူး၊ Nge Naing အကြောင်းတော့ အတင်းအဖြင်းတွေနဲ့ ဟုတ်တိပတ်တိလိုလို ရေးထားတာတွေက တလွဲချည်းပဲ။ Nge Naing က မဲဆောက်တခါမှ မရောက်ဖူးပါ။ ဒုက္ခသည်စခန်းထဲမှာ တခါမှ မနေဖူးပါ။ ဒါကို ဒေါ်လာစား က "Nge Naing က မဲဆောက်မှာ UN အရာရှိနဲ့ ရှုပ်တယ်၊ Nge Naing က ဒုက္ခသည် စခန်းမှာ ဆေးကုလာတယ်" စသည်ဖြင့် Nge Naing ကို ပြောထားတာတွေက တလွဲတွေချည်း ဆိုတော့ ဟာသ သက်သက်ပဲ။
(December 2, 2011 6:55 PM)
ဒေါ်လာစား ဆိုတဲ့ကောင်က အဲလို အမှားဖမ်းခံရလို့လည်း ရှက်တတ်တဲ့ အမျိုးအစား မဟုတ်ဘူး။ ဒေါ်လာစား က ကျွန်မဘလော့ဂ်မှာ လာနှောင့်ယှက်နေတာ ၂၀၁၀ ဖေဖေါ်ဝါရီခန့်ကတည်းကပါ။ အဲဒီကတည်းက ဒေါ်လာစား က ကျွန်မ ဘလော့ဂ်မှာ နည်းပညာ အကူအညီ ၀င်ပေးနေတဲ့ မိုးသွေးငယ်နဲ့ ကျွန်မကို စတင် လင်မယားပေးစားပြီး ကျွန်မဘလော့ဂ်မှာလည်း ကျွန်မနာမည်နဲ့ရော တခြားနာမည်မျိုးစုံနဲ့ပါ ပေါက်ကရ ၀င်ရေးသလို တခြားဘလော့ဂ်တကာမှာလည်း ကျွန်မနာမည်တွေနဲ့ ပေါက်ကရတွေ လျှောက်ရေးပြီး နှောင့်ယှက်လာတာ အခုထိပဲ။
ဒေါ်လာစား ရဲ့ ဘလော့ဂ် Myanmar Express ရဲ့ အဆင့်အတန်းကို ကြည့်ပြီး မဟုတ်မဟတ် အတင်းအဖြင်းပြောထားတယ် ဆိုတာ ဖတ်ကြည့်သူတိုင်း သိနိုင်ပါတယ်။ တခါတလေ ဒေါ်လာစား က ကျွန်မဘလော့ဂ်မှာ ပို့စ် လာလာကြော်ငြာထားလို့ Myanmar Express ဘလော့ဂ်ကို သွားကြည့်ဖြစ်ရင် သူ့ဘလော့ဂ်က ပို့စ် တွေက မှတ်ချက်တွေက သူများရေးတာက နည်းနည်းပဲ တွေ့တယ်။ ဒေါ်လာစား က နာမည်မျိုးစုံနဲ့ သူ့ဖါသာသာ သူ လျှာအခွတရာနဲ့ မှတ်ချက်တွေ လိုက်ရေးထားတာ အများကြီးပဲ တွေ့တယ်။ Nge Naing နာမည် သုံးပြီး ရေးထားတဲ့ မှတ်ချက်တွေလည်း အများကြီးပဲ တွေ့တယ်။ နောက်တော့ ကျက်သရေတုံးလွန်းလို့ Myanmar Express ဘလော့ဂ်ကို မသွားဖြစ်ဘူး။ အခုလည်း သူ့ဘလော့၈် လာကြော်ငြာတဲ့ မှတ်ချက်ကို ဖျက်လိုက်ပြီ။
စစ်ကျွန် ဒေါ်လာစား က ပြည်သူ့ဘက်သား မငယ်နိုင် ကို ၂၀၁၀ ခုနှစ်၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ကတဲက အခုထိ နှောင့်ယှက်လာတာပါ (၁) says:
စစ်ခေါင်းဆောင်တွေက ပြည်သူတွေ မသိအောင် ဖုံးထားတဲ့ သမိုင်းမှန် (စစ်အုပ်စုက ပြည်သူတွေကို ဥပဒေမဲ့ ဖိနှိပ် သတ်ဖြတ် နှိပ်စက်လာတဲ့ သမိုင်းမှန်) တွေကို ထုတ်ဖော်ပေးနေတဲ့၊ စစ်အုပ်စုရဲ့ သုံးမရအောင် ညံ့ဖျင်းမှု နဲ့ ပြည်သူ့ငွေတွေကို အကြီးအကျယ် ခိုးပြီး၊ လာဘ်စားပြီး ကိုယ်ကျိုးရှာမှုတွေကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံဟာ ဘက်ပေါင်းစုံမှာ နိမ့်ကျလာတဲ့ ပကတိ ဖြစ်ရပ်မှန်တွေကို တင်ပြပေးနေတဲ့ မငယ်နိုင် ကို စစ်အုပ်စုရဲ့ အထောက်အပံ့နဲ့ Myanmar Express နိုင်ငံရေးဘလော့ဂ် ရေးနေတဲ့ ကြေးစားဘလော့ဂါ ဒေါ်လာစား ဆိုသူက ရက်ရှည်လများ စဉ်ဆက်မပြတ် ပုတ်ခတ် တိုက်ခိုက် နှောင့်ယှက်လာတဲ့ အကြောင်းကို မငယ်နိုင်က စာဖတ်သူ လူသစ်တွေကို ရှင်းပြထားတာပါ။
စစ်ကျွန် ဒေါ်လာစား က ပြည်သူ့ဘက်သား မငယ်နိုင် ကို ၂၀၁၀ ခုနှစ်၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ကတဲက အခုထိ နှောင့်ယှက်လာတာပါ (၂) says:
December 9, 2011 at 6:06 PM Reply
မငယ်နိုင်က စာဖတ်သူ လူသစ်တွေကို ရှင်းပြထားတာပါ။